Articles in Education and Movies | Yangon Directory | Myanmar Business Directory | Advertise in Yangon - Yangon Directory | Yangon Yellow Pages
Articles in Education and Movies
COVID-19 Updated 328
Event & Entertainment 28
Shopping & Promo 27
Yangon Trend 203
on 02 September, 2020
Netflix ရဲ့ အကောင်းဆုံး Series တွေထဲက တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Peaky Blinders
IMDB Rating 8.8 ထိ ရရှိထားတဲ့ ဒီနာမည်ကြီး Series ကိုတော့ တော်တော်များများ သိကြပြီးသား ဖြစ်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ Read full article
ဆယ်တန်းအောင်ပြီးသူတိုင်း ရွေးချယ်နိုင်မယ့် ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ လူသိများတဲ့ Private University (၅) ခု
တက္ကသိုလ်၀င်စာမေးပွဲ အောင်မြင်ထားတဲ့ လူငယ်တွေအနေနဲ့ ကိုယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့ ဘာသာရပ်ကို သေချာရွေးချယ် တတ်ရောက်နိုင်ဖို့အတွက် ... Read full article
သူနာပြု နှင့် သားဖွားသင်တန်းကျောင်းများတွင် ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေးပေးအပ်မည်
သူနာပြုနှင့် သားဖွားသင်တန်းကျောင်းများတွင် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ပညာသင်နှစ်အတွက် သင်တန်းတက်ရောက်သော သူများအား တစ်လလျှင် Read full article
(၂၀၀၃)ခုနှစ်က K Drama ကို ပြန်လည်ဆန်းသစ် ရိုက်ကူးထားတဲ့ Classic Again ထိုင်းဇာတ်လမ်း
တစ်ပတ်လုံး အလုပ်သွားပြီး ပိတ်ရက်ရောက်ရင် ပျင်းတတ်ကြတယ်မလား? နေပူပူမှာ အပြင်လည်း မသွားချင်ဘူး၊ အိမ်မှာပဲ အေးအေးဆေးဆေး ဇာတ်လမ်းလေးကြည့်ပြီး Chill ချင်သူတွေနဲ့ Romance Drama ဇာတ်လမ်းကောင်းကောင်းကိုမှ ကြိုက်နှစ်သက်သူများအတွက် ... Read full article
၃၅%အထိ လျှော့ဈေးများနဲ့ ရောင်းချပေးနေတဲ့ စိတ်ကူးချိုချိုစာအုပ်တိုက် ၂၁နှစ်ပြည့် စာအုပ်ရောင်းပွဲ
ာအုပ်ချစ်သူတို့အတွက် စိတ်ကူးချိုချိုစာအုပ်တိုက်ရဲ့ ၂၁နှစ် နှစ်ပတ်လည် စာအုပ်အရောင်းပွဲတော်အကြောင်းနဲ့ ရရှိနိုင်မယ့် စာအုပ်အမျိုးအစားတွေကို ပြောပြပေးသွားချင်ပါတယ်။ Read full article
Laptop တစ်လုံးဝယ်ရင် ဘာတွေ ကြည့်ရမလဲ၊ ဘာတွေသိထားသင့်လဲ ?
(၂၁) ရာစုမှာတော့ Laptop ဆိုတာ လူတိုင်းနဲ့ အကျွမ်းတဝင် ဖြစ်လာပြီး၊ အိမ်တိုင်းလိုလိုမှာ သုံးလေ့ရှိတဲ့ ပစ္စည်းတစ်ခု ဖြစ်လာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Laptop ဝယ်တဲ့အခါ ဘယ်လိုအချက်တွေကို ရွေးဝယ်သင့်လဲ ဆိုတာကို ... Read full article
on 10 August, 2020
၂၀၂၀ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း စာမေးပွဲ အောင်မြင်သူများနှင့် Top 10 ရရှိသူများ စာရင်း
မြန်မာနိုင်ငံမှာ Covid - 19 ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ (၂၃.၃.၂၀၂၀) မှ စတင်ပြီး ဆယ်တန်းစာမေးပွဲ အမှတ်စစ်ဆေးခြင်းနဲ့ အောင်စာရင်းကြေညာချက်တွေကို ရပ်ဆိုင်းထားဖို့ အမိန့်ထုတ်ပြန်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ် ... Read full article
on 06 August, 2020
လွယ်မလိုနဲ့ ခက်တဲ့ အင်္ဂလိပ်စကားကို ဘယ်လို လေ့လာသင့်လဲ?
၂၁ရာစုမှာ အင်္ဂလိပ်စာဟာလည်း အရေးပါတဲ့ အခန်းကဏ္ဍတစ်ခုမှာ ပါဝင်လာပါတယ်။ မိမိက အလုပ်မအားလပ်လို့ပဲဖြစ်စေ၊ လေ့လာတဲ့နေရာမှာ အားနည်းနေတာဖြစ်စေ၊ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် အင်္ဂလိပ်စာကို လေ့လာချင်ပေမယ့် လေ့လာရတာ အခက်အခဲ ဖြစ်နေပါသလား? ... Read full article
on 05 August, 2020
လူငယ်တွေအကြိုက် ရိုမက်တစ်ဆန်ဆန် ကြည့်ရှုခံစားရမယ့် The Kissing Booth 2
ပိတ်ရက်မှာ ဇာတ်လမ်းကောင်းကောင်း ကြည့်ရင်း StayHome ဖို့ စဉ်းစားနေကြသူများအတွက် လွန်ခဲ့တဲ့ ရက်အနည်းကမှ ပူပူနွေးနွေး ထွက်ရှိထားတဲ့ The Kissing Booth2ဇာတ်လမ်းလေးကို Review အနေနဲ့ ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ ... Read full article
ရန်ကုန်ပညာရေး တက္ကသိုလ်မှ ကျောင်းသား ၊ ကျောင်းသူများ ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေး လျှောက်ထားနိုင်
ရန်ကုန်ပညာရေး တက္ကသိုလ်မှ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ်အတွက် ပထမနှစ်တက်ရောက်နေသော ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများအား ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေး ထောက်ပံ့ရန် စိစစ်ရွေးချယ်မည် ဖြစ်ကြောင်း ဇူလိုင် ( ၂၈ ) တွင် ကြေညာထားသည်။ Read full article
ဒီတစ်ပတ်အတွင်း အခမဲ့ တက်ရောက်နိုင်မယ့် Online Free Class များ
Covid ကာလအတွင်း တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူတွေနဲ့ ပညာရပ်အသစ်တစ်ခုကို လေ့လာဆည်းပူးချင်သူတွေအတွက် ကျောင်းတွေ ပိတ်ထားတုန်းမှာ အိမ်မှာနေရင်း အချိန်ကို အကျိုးရှိရှိ အသုံးချနိုင်ဖို့ August လ အတွင်း Online ကနေ Free သင်ကြားပေးနေတဲ့ ပညာဒါနသင်တန်းတွေ... Read full article
Netflix ရဲ့ Hot အဖြစ်ဆုံး ဇာတ်လမ်းတွေထဲက တစ်ခုဖြစ်တဲ့ The Old Guard
ဇာတ်လမ်းဇာတ်အိမ် ခိုင်မာတဲ့ Action ဇာတ်ကားကောင်းကောင်းကိုမှ ကြိုက်နှစ်သက်သူများအတွက် ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ The Old Guard ဆိုတဲ့ Action ဇာတ်လမ်းကောင်းလေးအကြောင်းကို ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ Read full article